के कपाललाई सिल्की र आकर्षक बनाउन चाहनु हुन्छ ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
के कपाललाई सिल्की र आकर्षक बनाउन चाहनु हुन्छ ?
अम्बु रुचाल, ब्यूटिसियन
तपाईको कपाल रुखो र स्याहार गर्न गाह्रो हुने किसिमको छ ? यदी तपाई आफ्नो कपाललाई सिल्की र आकर्षक बनाउन चाहनु हुन्छ भने आफ्नो कपाललाई केराटिन ट्रिटमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ । केराटिन ट्रिटमेन्ट गर्नु अघि केहि कुराहरु थाहा पाउनु भने जरुरी हुन्छ ।
तपाई रुखो र कर्लि कपाल लिएर ब्यूटीपार्लर जानु भयो भने ब्यूटिसियनले तपाईलाई कपालको केराटिन ट्रिटमेन्ट गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ । केराटिन ट्रिटमेन्टले तपाईको रुखो र कर्लि कपाललाई नरम र सिधा बनाउन मद्दत गर्छ । तपाई पहिलो पटक केराटिन ट्रिटमेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने यसबाट हुने फाइदा र बेफाईदाको बारे तपाई पहिला नै जानिफकार हुनु पर्छ ।
केराटिन ट्रिटमेन्ट भनेको के हो ?
केराटिन भनेको हाम्रो कपालमा हुने नेचुरल प्रोटिन हो जसले हाम्रो कपाललाई नरम र चम्किलो बनाउन मद्दत गर्छ । घाम, धुवाँ, धुलो र कपालमा लगाइने विभिन्न कलर तथा केमिकलले कपालमा भएको प्रोटिनलाई नष्ट गर्दै लगेको हुन्छ । जसले गर्दा हाम्रो कपाल रुखो हुदैं गएको हुन्छ । यसरी नष्ट भएको कपालको प्रोटिनलाई सुधान गर्ने प्रक्रियालाई केरटिन ट्रिटमेन्ट भनिन्छ ।
यस प्रकृयामा कपालमा कृतिम तरिकाले केराटिन राख्ने गरिन्छ । जसले हाम्रो कपाललाई नरम चम्किलो र सिधा बनाउन मद्दत गर्छ । आजभोली यो ट्रिटमेन्ट बिशेषत महिलाहरूमा लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
केराटिन ट्रिटमेन्टको फाइदा
– कपाल अल्झिन कम हुन्छ र कपाललाई सम्हाल्न सजिलो हुन्छ ।
– कपाल चम्किलो तथा सलक्क परेको हुन्छ ।
– कपाल सीधा हुन्छ जसले गर्दा तपाईले विभिन्न तरिकाले कपाल बाँध्न र खुला छोड्न सक्नुहुन्छ ।
– घाम र अन्य प्रदुषणबाट कपालमा हुने क्षतिलाई कम गर्छ ।
– कपालको अन्य समस्याहरु जस्तै– टुक्रने, झर्ने जस्ता समस्या कम हुदै जान्छ ।
केराटिन ट्रिटमेन्टको बेफाईदा
– तपाईको कपाल छिटो तैलिय हुन्छ र कपाल चिपचिप महशुस हुन्छ ।
– केराटिन गरे पछि ३ देखि ४ दिनसम्म कपाल नुहाउनु पाईदैन ।
– यो ट्रिटमेन्ट गर्न धेरै पैसा खर्च हुन्छ तर यसको फाइदा भने ३ देखि ५ महिना मात्र रहन्छ ।
– केराटिन ट्रिटमेन्टमा प्रयोग भएको केमिकलले तपाईलाई रिंगाटा लाग्ने, छाला चिलाउने जस्ता समस्याहरु देखापर्न सक्छन् ।
– कपालमा भएको प्राकृतिक प्रोटिन जस्तो कृक्रिम रुपमा राखिएको केराटिन प्रकृतिक जस्तो भने हुदैन ।